Ceiling Panel, Wall Panel, Magnesium oxide Mabhodhi - CESE2
Zita XLPE Yakasimudzwa Simba Cable Standard IEC60502, BS, DIN, ASTM, GB12706-2008 standard Voltage Kusvikira ku 35KV Kondakita Mhangura kana Aluminium Kondakita Muchikamu Chikamu Zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi. yakatarwa voltage 35kV uye pasi pe35kV yekufambisa mutsara. Pasuru Wooden Drum Package kana Iron-yemapuranga dhiramu Insulation PVC kana XLPE XLPE yakamisikidzwa simba tambo yakakodzera yekuisa fixe ...
dombo shinda sangweji Panel nekaviri dura magn ...
Chigadzirwa Chigadzirwa Rock dombo sangweji pani Hupamhi 900mm 980mm 1160mm 1180mm Max Kureba 6000mm kana yakagadziriswa Wall Ukobvu 50mm 75mm 100mm Simbi Chiso Cheukobvu 0.5-1.0mm Yekunze Plate Nyaya PPGI, Al-mg-M, n Alloy simbi, SS simbi, Ti-Zn simbi , HPL, VCM Kuchengeta PE, PVDF, HDP Core zvinhu EPS Chimiro Dhizaini kana chimiro chimiro chimiro Kemikari, zvekurapa, zvemagetsi, zvekudya, yemishonga yakachena kamuri Inotora yakanaka mhando PCGI pepa pepa ine EPS yekuzadza. Han ...
Kirasi 1 simba rinoponesa rakatwasuka pamupendero mhando LED cl ...
Chigadzirwa Chigadzirwa Yakatwasuka pamucheto mhando LED yakachena pani mwenje Simba 14W 28W 18W 36W Chibviro China Voltage AC200V Insulation mwero Kirasi 1 Chitupa CE CCC RoHS Chiedza chakajeka chinobuda chakazara zvakati sandara, iine yakafara luminance Angle. Dhizaini dhizaini dhizaini, kudzivisa mwenje mumwe wakashata unokanganisa maitiro, akasununguka kubva mukuvhiringidzwa neredhiyo, haasvibise nharaunda. Simba rekuchengetedza, kupenya kwakakwira, hapana mercury, isina infrared, hapana ULTRAVIOLET, hapana kupokana kwemagetsi, hapana ...
Kirasi 1 kirasi 0 rabha epurasitiki kuputira mater ...
Kumusoro kuchengetedza moto mashandiro Iko kusingaite moto kweClass B1 yakavezwa rabha uye zvigadzirwa zvepurasitiki zvakazara zvinosangana nezvinodiwa zvekupisa kirasi B1 uye pamusoro zvakatemwa mu GB 8627 "Classification Maitiro eKomboni Yemaitiro Ezvinhu Zvekuvaka". Tora iyo yakasarudzika yekudzivirira yekudzivirira fomula, iwo mamiriro ari mumoto mamiriro, iyo yehusungwa yevasungwa idiki, kana iyo combustion isingazoburitse inokuvadza kune yemunhu hutsi utsi. Proprietary nano micro foa ...
Kutanga zvinhu sainzi (Thailand) Co., Ltd.
CESE2 (Thailand) Co. Ltd, yakavambwa muna 2016, iri muBangkok, guta guru reThailand. Iri pasi peChina Electronics System Injiniya No.2 Kuvaka Co.Ltd iyo yakasungirirwa kuCEC.
Isu takatarisana nevatengi uye tinobata epamba inotungamira yakachena system yeinjiniya tekinoroji senge yedu yepamoyo kukwikwidza. Isu tinopa masevhisi ehunyanzvi kune makuru-epamhando yepamusoro-fekitori yekuvaka muminda ye semiconductors, mafuratifomu emadziro ekuratidzira, chikafu nemishonga, masainzi ehupenyu, masainzi ekutsvagisa kwesainzi, simba nyowani, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kwemaindasitiri, bhizinesi rakangwara, nezvimwewo Kunze kweizvozvo, isu tinopa imwe-yekumira uye yese-yakatenderera yakarongeka ouinjiniya mhinduro yeepamusoro-tech yekugadzira indasitiri.